हार्दिक श्रादान्जलि!!! नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव भरत सुवेदीको कोरोनाका कारण मृत्यु – Dailny NpNews
हार्दिक श्रादान्जलि!!! नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव भरत सुवेदीको कोरोनाका कारण मृत्यु
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ०३, २०७८ समय: ९:५५:१९
काठमाडौँ – राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेका नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव भरतराज सुवेदीको कोभिड–१९ संक्रमणबाट निधन भएको छ । निजामति सेवाबाट सेवा निवृत्त भएपछि अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा बसोबास गरिरहेका उनी गत महिना मात्रै आमासँग भेटघाट गर्न काठमाडौँ आएका थिए ।
राजस्व प्रशासनमा सुवेदीका काम सधैं चर्चा र विवादमा परिरहन्थे । सेवा निवृत्त हुने समयमा उनी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक थिए । सुवेदीको केही वर्षअघि भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । सुवेदी निकटस्थहरूका अनुसार उनको ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो ।
जनआस्थाका अनुसार सुवेदी अख्तियारले राजश्वका २२ जना कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउँदा पक्रन नसकेको एकमात्र सरकारी कर्मचारी थिए । बहालरत कर्मचारी छँदै पारिवारिक कारण उनले अष्ट्रेलियाको स्थायी आवासीय सुविधा (पीआर) लिएका थिए ।
सात वर्षअघि उनलाई तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको समयमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो । लामो समयसम्म रमाना नभएपछि उनले आफ्नै सहकर्मी सहसचिव तीर्थराज खनालप्रति सार्वजनिक गुनासो पोखेका थिए ।
लगत्तै खनालले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुवेदीले ज्यान मार्ने ध’म्की दिएकाले आवश्यक सुरक्षा गरिपाउँ भनी निवेदन हाले । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राजश्वमा लैजान खोज्दा पनि उनको रमाना पत्रमा दस्तखत गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव खनाल अनकनाएका थिए ।
त्यतिबेला सुवेदी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा थिए । खनालले सिडियो कार्यालयमा निवेदन हालेपछि तत्कालीन गृहसचिव सूर्य सिलवालले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई खनालको जीवनरक्षाको निम्ति आवश्यक प्रबन्ध गर्न आदेश दिएका थिए ।